xoogga dalka oo deegaanka Geed Timir ku dilay tiro ka mid ah Al-Shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
xoogga dalka oo deegaanka Geed Timir ku dilay tiro ka mid ah Al-Shabaab
11th May 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa Nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa howlgallo ay ka fuliyeen deegaanka Geed Timir oo qiyaastii 15 km ka xiga deegaanka Galcad ee hoostaga degmada Ceel Buur ee gobolka Galgaduud ku dilay tiro ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee Gobolka Galgaduud Maxamed-deeq Cabdi Maxamuud oo la hadlay Guddoomiyaha deeganka Galcad ayaa sheegay in ciidamada ay xalay howlgallo ka fuliyeen deegaanka Geed Timir, halkaasi oo ay ku dileen in ka badan toban ka tirsan maleeshiyaad Al-Shabaab, ayna ku soo furteen hub iyo gaadiid dagaal.
Guddoomiyaha Deegaanka Galcad Qadar Maxamed Cali ayaa sheegay in hubka iyo gaadiidka dagaal ee laga soo furta argagixisada Al-Shabaab iminka la soo gaarsiiyay deegaanka Galcad, isagoo intaa ku daray inay xoojiyaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa Nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay wadeen howlgallo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, kuwaasi oo guulo la taaban karo ka soo hooyay howlgallada.
xooga dalka soomaliya
Ilka Xanaf oo maanta Wareejiyay xilkii Guddoomiyaha Maxkamadda Sare
Wasaaradda Shaqada oo shaacisay diiwaan gelinta shaqaale loo qaadayo Sucuudiga “Dhageyso”